Ọrụ Hospitallọ Ọgwụ na Singapore | Ngwọta OMG
Ọrụ Ụlọ Ọgwụ na Singapore
Na 2012, enwere ngụkọta nke ihe ndina ụlọ ọgwụ 10,756 na ụlọ ọgwụ 25 na ụlọ ọrụ pụrụ iche na Singapore, na-enye nha 2.0 akwa site na mmadụ 1,000 niile. Ihe dị ka 85% nke akwa ndị ahụ nọ n'ụlọ ọgwụ ọha na eze iri na ise na ụlọ ọrụ ọpụrụiche nwere akwa agbakwunye n'etiti 15 na akwa 185. N'aka nke ọzọ, ụlọ ọgwụ nzuzo iri na-adịkarị obere, na ikike sitere na akwa 2,010 ruo 10. Ọrụ Gọọmentị dị ka onye nlekọta ahụike kachasị na-enye gọọmentị ohere ịmetụta ịnye akwa akwa ụlọ ọgwụ, iwebata ọgwụ na teknụzụ dị elu / ọnụ ahịa dị elu, yana ọnụego ọnụ ahịa na-abawanye na ngalaba ọha nke na-etinye akara akara na usoro ọnụahịa maka ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
8lọ ọgwụ ọha mmadụ 6 nwere 24 nnukwu ụlọ ọgwụ izugbe (SGH, NUH, CGH, TTSH, KTPH & AH), ụlọ ọgwụ ụmụ nwanyị na ụmụaka (KKH) na ụlọ ọgwụ psychiatry (IMH). Generallọọgwụ n'ozuzu ha na-enye ọtụtụ ndị na-agwọ ọrịa na ndị ọkachamara n'ịgba ọgwụ na ngalaba 6 na-ahụ maka mberede. Na mgbakwunye, enwere ụlọ ọrụ ọpụrụiche mba XNUMX maka kansa, obi, anya, akpụkpọ, neuroscience, nlekọta eze na ụlọ ọgwụ maka ọtụtụ ọzụzụ.
N'ime ụlọ ọgwụ ọha na eze, ndị ọrịa nwere nhọrọ nke ụdị ụlọ obibi dị iche iche maka nnabata ha. 81% nke akwa ụlọ ọgwụ ọha na eze (klas B2 na C) na-enye nkwado dị ukwuu na 19% fọdụrụnụ na enyemaka ego ala na 20% maka klas B1 na enweghị enyemaka maka ngalaba klas A. Na 2012, ogologo oge ịnọ n'ụlọ ọgwụ nnukwu ụlọ ọgwụ na-elekọta ihe dị ka ụbọchị 5.8 ebe ọnụọgụ obibi obibi dị gburugburu 85%.
Gọọmentị emezigharịla nnukwu ụlọ ọgwụ na ụlọ ọrụ ọpụrụiche na-arụ ọrụ dịka ụlọọrụ nkeonwe ndị nwe obodo niile. Nke a bụ iji mee ka ụlọ ọrụ ọha na eze nwee ike ịchịkwa onwe ha na mgbanwe iji meghachi omume ngwa ngwa maka mkpa nke ndị ọrịa. N'ime usoro a, e mepụtala usoro nyocha azụmahịa, na-enye nkọwa zuru oke nke ụgwọ ọrụ na ịkụnye ịba ụba ego na njikọrịta. Ụlọọbịa ọha na eze dị iche na ụlọ ọgwụ ndị ọzọ na ha nwetara ngọngọ gọọmentị kwa afọ ma ọ bụ onyinye maka inye ndị ọrụ ọrịa ọrụ enyemaka. A ghaghị ijikwa ha dị ka òtù ndị na-abụghị maka ego. Ndị gọọmentị ọha na eze na-agbaso ndụmọdụ nduzi sara mbara site n'aka gọọmentị site na Ministry of Health.
Gọọmentị emewokwa ka ụlọ ọgwụ ndị dị na obodo nweta nlekọta ahụike maka ọrịa na ndị agadi na-adịghị achọ ka nlekọta ụlọ ọgwụ niile.
Nzuzo 13655 6 Echiche Taa